Project Orientation - IYCAP (Bago) - Nyein (Shalom) Foundation
Vision & Goal & Stance
State & Region Advisory Team
Community Peace Support Project
Durable Peace Program
Sone Yat Project
Kachin Education Consortium (KEC)
Dialogue among Diversity (DaD)
Humanitarian Assistance for Peace (HAP)
Supporting Nutrition and Livelihoods through SHG in Kachin State, Myanmar (SuN-Live Project)
Peace Center (Nawng Nang)
Project Orientation – IYCAP (Bago)
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူလူငယ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း အစီအစဉ်၏ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံမှ လူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (IYCAP) စီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့၊ ဥဿာမြို့သစ် (၇) ရပ်ကွက်ရှိ စေတနာအလင်းအိမ် ပညာဒါနသင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဥ်တွင် ပဲခူးမြို့တွင်းမှ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြည်ခရိုင်မှ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ တောင်ငူခရိုင်မှ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံမှလူငယ်များ၊ IYCAP စီမံကိန်းမှ လူငယ်များအပါအဝင် အမျိုးသား (၄၃) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁၁) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၄) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစီအစဥ်တွင် ပဲခူးမြို့ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ သိက္ခာတော်ရ ဦးယောဟန်မှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအကြောင်း၊ IYCAP စီမံကိန်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး IYCAP စီမံကိန်း၏ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုများကို ပြသပြီးနောက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုချက်များရယူခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဥ်အား IYCAP စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ကိုသူရနိုင်၊ ကိုရဲလင်းထွန်းနှင့် မခွာညိုသင်းတို့က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံလူငယ်များကို IYCAP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဥ်များအား မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန်၊ ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ ပဲခူးအရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်း အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ငန်းစဥ်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လာနိုင်ရန်နှင့် IYCAP စီမံကိန်းမှ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဥ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြကာ ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Supporting IDP Household Level Business (Livelihood) - DPP
Interfaith Peace Campaign - IYCAP (Kayin)
Community Healing and Resilience Activity - IYCAP (Bago)
Fellowship, Gathering & Donation (Kayin)
Community Dialogue - DaD
No.99(A), Room 8-C, Shwe Padauk Condo Myay Nu Street, Sanchaung Township, Yangon
+95 1 510 487
No.GD 90 Shata Pru, Myitkyina, Kachin State
+9574252 3987
Kayah State Office
No. 391 (B), Thiridaw Road, Naung Ya (A), Near Naung Ya Market, Loikaw, Kayah State
+9595600 971
Kayin State Office
No.(9/396), Kyan Sitthar Street, Yadanardipa, No.9 Ward, Hpa-An, Kayin State
+959797 145 577
No.101, Bogyoke Street, Pyidawthar Ward, Hakhar Chin State
+959442 000 894
No.280, Corner of Myaing Thar Yar & 4th Street Myaing Thar Yar, Mawlamyaing, Mon State
+959425 363 781
11 Mile, Gaw Nan Village, Nawng Nang Tract, Myitkyina, Kachin State. Located on the highway between Myitkyina and Sumprabum
Fraud Prevention (Hotline)
© 2020 Nyein (Shalom) Foundation. All Rights Reserved. Created by